၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်
၅၀၀၀ တန် ဆင်းမ်ကဒ်
Posted by the best on Jan 10, 2012 in Myanma News, News | 16 comments
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်။ ။ အခုလ ပထမအပတ်က ပြည်သူလူထုကြား ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကဒ် တစ်ကဒ်ကို ကျပ် ၅၀၀၀ နဲ့ ရောင်းချဖို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေခြင်းမှာ ဥပဒေ အရရော နည်းပညာ အရပါ လောလောဆယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က ပြောကြားပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ မွန်လွဲ ၁ နာရီက မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စာတိုက် သင်တန်းကျောင်းမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းက လက်ရှိပေးနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
“ကျွန်တော်တို့ နားလည်တာတော့ ဥပဒေအရဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပဲ ပေါင်းလုပ်ရမှာပါ။ နိုင်ငံတော်ကသာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ ဥပမာ- သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတို့၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းတို့၊ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ လျှပ်စစ်တို့ စတာတွေက နိုင်ငံတော်ကသာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဆိုပြီး အခြေခံဥပဒေမှာကို ပြဋ္ဌာန်းထားတာ။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ နိုင်ငံတော်နဲ့ အများပြည်သူ အကျိူးစီးပွား အလို့ငှာဆိုတဲ့ တစ်ပိုဒ်ရှိတယ်။ Private (ပုဂ္ဂလိက) ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ခွင့်ပြုတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါင်းလုပ်ရမယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ GSM သန်း ၃၀ စီမံကိန်း လုပ်သလိုမျိုး ပေါင်းလုပ်ရမယ်” လို့ အခြေခံဥပဒေကို ကိုးကားပြီး ပြောပါတယ်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်နေစဉ်အတွင်း သတင်းစာဆရာများက အဆိုပါ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာလည်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး အနေနဲ့ ၎င်းတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကိစ္စဖြစ်လို့ တစ်စုံတစ်ရာ ထင်မြင်ချက် မပေးလိုကြောင်း၊ နည်းပညာအရ မိုဘိုင်းကွန်ယက် တစ်ခုဖြစ်ဖို့ တည်ဆောက်ရာမှာ နေချင်းညချင်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ချပေးထားတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွန်ယက် ချိတ်ဆက် ခေါ်ဆိုမယ် ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ကြောင်း၊ အလားတူ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ မိုဘိုင်းကွန်ယက်ထဲ မဖြတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း စသဖြင့် နည်းပညာအရ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေတွေကို မိုဘိုင်းဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးသိန်းဝင်းနဲ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာန အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးဇော်မင်းဦးတို့က ရှင်းပြပေးပါတယ်။
ဆင်းမ်ကဒ် တစ်ကဒ်ကို ကျပ် ၅၀၀၀ နဲ့ ရောင်းချပေးပြီး မြို့တွင်း ၂၅ ကျပ်၊ နယ်ဝေး ၃၀ ကျပ်နဲ့ GSM ဖုန်းတွေ ရောင်းချပေးနိုင်ဖို့ ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီက ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်း အခုလ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် တင်ထားဆဲ အခြေအနေသာဖြစ်လို့ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့် မရသေးဘူးလို့လည်း ဆိုတယ်။ အခုလို တကယ် လုပ်ကိုင်ခွင့်မရသေးဘဲ သတင်း ထုတ်ပြန်မှုမျိုးတွေ ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုအတွက် အခက်တွေ့နိုင်ကြောင်း အွန်လိုင်း Developer တစ်ဦးက သူ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ လူထု အခက်တွေ့တာ မဟုတ် ။ သူတို့ အခက်တွေ့တယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ် ။
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အပြည့်အ၀အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူး….
ဒီမိုကရေစီဆိုတာလေး နဲနဲရောလာတာတောင် ဒင်းတို့ အနေရခက်ကုန်ပြီ….
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နင်တို့နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့စနစ်ဆိုးတစ်ခုပါ….
တို့နိုင်ငံမှာလဲ မျိုလို့ ဆို့လို့ ကိုမ၀နိုင်ဖြစ်နေပါပေါ့လား
သိန်းအစိတ် သုံးဆယ်ဖုန်း ၊ ၁၅သိန်းတန်ဖုန်း ၊ ၅သိန်းတန်ဖုန်း ၊
ဈေးသက်သာမဲ့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းကျတော့
“ အရဂါး ချဒါ ” ပေါ့နော်
ဖြေသွားပုံက အရမ်းးမိုက်တယ်။ မိုက်မဲတယ်။ ဥာဏ်တုံးတယ်။ လို့ ပြောတာပါ။
ဒီအခန်းဖြတ်။ ဒါ နိုင်ငံ တော် အကြည်ညိုပျက်အောင်လုပ်နေတာ။
ကျနော်တို့ ညှိနှိုင်းစရာတွေ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေနေအရ မြန်မြန်ဆန်ဆန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် အဆင့် လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် သည်းသန့် ဆွေးနွေးစရာ တွေရှိနေသေးကြောင်း၊ ကျိုးကြောင်းကိုက်ညီမှုရှိရင် ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း၊ နောင် မကြာတော့မည့် ကာလတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း၊ နောင်မျိုးဆက် တစ်ဆက်လောက်ထပ်စောင့် ရနိုင်ကြောင်း။ ကြောင်း ၊ ကြောင်း ဖြေပေါ့။
အင်းပထမပိုစ့်မှာကျွန်မမန့်ထားသလိုပါပဲ။ အမှောင့်ပရောဂကတော့စလာပြီ။ တွက်ပြီးသားပါ။ ဒါကိုလဲ ရွှေပြည်တံခွန်ကတွက်ထားမှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲလက်ဦးမှု့ရယူပြီးသတင်းအရင်ဖြန့်တာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကစေတနာရှေ့ထားတယ်ဆိုတာငြင်း လို့မရတော့ပါဘူး။ ဖြစ်မလာခဲ့ရင်လဲအရှုံးထဲကအမြတ်ထွက်တာကတော့ဒင်းတို့ဘယ်လောက်အမြတ်ကြီးစားတယ်ဆိုတာငြင်းမရတော့ဘူးပေါ့။ ဒင်းတို့လောဘတွေဘူးပေါ်သလိုပေါ်တာပဲပေါ့။ မှတ်မိကြမလားမသိဘူး။ ၅ သိန်းဖုန်းတွေချပေးနေတုန်း ၃ သိန်းဖုန်းပေါ်မယ်ပြောတော့မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးကတာဝန်ရှိသူ ( အဲဒီလူပဲမှတ်တယ် ) ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ငြင်းဖူးပါတယ်။ 2011 နှစ်လည်လောက်ကဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့အခုဟုတ်နေတာပဲ။ အဲဒီတော့သူတို့ကြိုးစားပြီး တားလဲမီဒီယာနဲ့ပြည်သူညီညွတ်ရင်ကြာကြာ မတားနိုင်ပါဘူး။ ရွှေပြည်တံခွန် က မြွေမှန်ရင်တော့ တွင်းဝင်ဖြောင့်မှာပါ။ ပြည်သူ့အတွက်စေတနာမှန်ရင်မကြာခင်မှာအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မနေ့က မန့်ခဲ့ပါသေးတယ် အဲ့ကောင်တွေညစ်မှာ ကြောက်တယ်လို့
မီးဒုတ်! မီးဒုတ်! ပေါ့ဗျာ
ကောင်းတယ်၊ ၅၀၀၀ တန် ဆိုရင် လူတိုင်း နီးပါး သုံးနိုင်ပြီ။
“မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကဒ် တစ်ကဒ်ကို ကျပ် ၅၀၀၀ နဲ့ ရောင်းချဖို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေခြင်းမှာ ဥပဒေ အရရော နည်းပညာ အရပါ“ လောလောဆယ်” မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က ပြောကြားပါတယ်။”
မှန်ပါတယ်။2သိန်းခွဲတန်PHONE SIM CARD သန်3း0ကို5နှစ်ရောင်းအုံးမယ်လေ။
ပြီးတော့မှမင်းတို့ 5000နဲ့ ရောင်း။“ လောလောဆယ်” မဖြစ်နိုင်ဘူး။လို့ ဆိုချင်တာလား။
“ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ချပေးထားတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုကွန်ယက် ချိတ်ဆက် ခေါ်ဆိုမယ် ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ကြောင်း၊”
သုံးကြတာပေါ့ကွာ။(မှတ်ချက်= မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကချိတ်ဆက်ခွင့်မပြုခဲ့လျှင်)
နိုင်ငံတကာမှာ အခုလို ဈေးနှုန်းချိုချိုသာနဲ သုံးခွင့်၇နေတာကို သမဒကြီးက အခုမှ သိတာတဲ့… ဆက်သွယ်ေ၇းက လူတွေ လုပ်စားနေတာကို အခုမှ သိတော့တယ်..တဲ့… ၅ဝဝဝ တန်ကတော့ တကယ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျော်လင့်၇တာပဲ.. ဆက်သွယ်ေ၇းက ကောင်တွေ ဘယ်တော့ပြုတ်မလဲ စောင့်ကြည့်နေပါ..။ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်း၇ပ်ဝန်းက ၇ထားပါကြောင်း..
ပြည်သူလူထုဆီက ပိုးဆိုးပက်စက် ၀ါးမြိုလို့ မ၀သေးတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကို အရေးယူပေးပါချင့်
ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပေးပါချင့်.သများတို့ ပြည်သူတွေကို ရေလည် ရိုက်စားလုပ်လွန်းပါတယ်ချင့်
“နိုင်ငံတကာမှာ အခုလို ဈေးနှုန်းချိုချိုသာနဲ သုံးခွင့်၇နေတာကို သမဒကြီးက အခုမှ သိတာတဲ့… ”
ဗျို့ ဆရာ ပြန်ပြင်လိုက်ဦး။ သမတဂျီးကို ပက်ပက်စက်စက်စော်ကားလိုက်သလိုပဲ……..
“ဆက်သွယ်ေ၇းက လူတွေ လုပ်စားနေတာကို အခုမှ သိတော့တယ်..”
ချက်တွယ်ရေးတစ်ခုတည်းချားတာတော့မဟုတ်လောက်ဘူး၊ပစ်စီးတင်တွင်းတဲ့၊ ကုန်ပနီတွေနဲ့ (မူဝါဒအတိုင်း)ပေါင်းစားတာဖြစ်မယ်၊ ကုန်ပနီတွေဆိုတာလဲ………….
သမ္မတကြီးဆီ တိုင်ချင်ရင် အမည် အသက် နေရပ် ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ ယောက်ျားထောက်ခံစာ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံစာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်စားကြောင်းထောက်ခံစာ
ပြနိုင်ရမည်။ မပြနိုင်ရင် စာတိုက်မှ ပယ်ချပါကြောင်း
ဧကန္တ ဦးဖျဲက ရတနာပလုံက ထင်ဒယ်နော့
5000 ဆိုတော့လူတိုင်းအဆင်ပြောတာပေါ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကပြောတယ်
မယူမှာစိုးလို့ အတင်းကိုလိုက်ထိုးပေးသေးတာ။ ပိုက်ဆံဖြည့်ပြီးသုံးရင်ပဲ သူတို့ကကျေနပ်ပြီး။
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တော့လောက် အလကားဝေမှာလဲနော်…